Voucherify: Manomboha fampiroboroboana manokana miaraka amin'ny drafitra maimaim-poana an'i Voucherify | Martech Zone
Voucherify dia rindrambaiko fitantanana fampiroboroboana sy fahatokiana voalohany amin'ny API izay manampy amin'ny famoahana, mitantana ary manara-maso ny fampielezan-kevitra fampiroboroboana manokana toy ny tapakila fihenam-bidy, fampiroboroboana mandeha ho azy, karatra fanomezana, famafazana, programa momba ny tsy fivadihana, ary programa fanolorana.
Ny fampiroboroboana manokana, ny karatra fanomezana, ny fanomezana, ny tsy fivadihana, na ny programa fanondroana dia zava-dehibe indrindra amin'ny dingana voalohan'ny fitomboana.
Ny fanombohana dia matetika miady amin'ny fahazoana mpanjifa, izay ny fandefasana tapakila fihenam-bidy manokana, fampiroboroboana sarety na karatra fanomezana dia mety ho zava-dehibe amin'ny fitaomana mpanjifa vaovao.
Maherin'ny 79% amin'ny mpanjifa amerikana sy ny 70% amin'ny mpanjifa UK no manantena sy mankasitraka ny fitsaboana tsirairay izay miaraka amin'ny traikefa e-varotra namboarina manokana.
Satria ny mpanjifa fototra ho an'ny fanombohana dia matetika ambany, ny upselling dia ampahany manan-danja amin'ny paikady. Ny fandefasana ny fampiroboroboana sarety sy ny amboara vokatra dia afaka manampy amin'ny fisondrotana be.
Zava-dehibe ny fandaharana referral mba hamoahana ny teny ary mety ho motera fitomboana ho an'ny fanombohana miaraka amin'ny vokatra tsara nefa tsy dia fahita firy (Angovo OVO, ohatra, nampiasa io paikady io mba hidirana tsena vaovao).
Ny marketing referral dia miteraka 3 ka hatramin'ny 5 heny ny tahan'ny fiovam-po ambony noho ny fantsona marketing hafa. 92% amin'ny mpanjifa no matoky ny torohevitr'ireo namany ary 77% amin'ny mpanjifa no vonona hividy vokatra na hampiasa serivisy atolotry ny olona fantany.
Nielsen: Matokia amin'ny dokam-barotra
Loharanom-baovao sarobidy ho an'ny mpanjifa vaovao izany, indrindra ho an'ny orinasa niche.
Ny fandaharan'asa momba ny tsy fivadihana dia mety ho toa tafahoatra ho an'ny orinasa vao manomboka, saingy raha tsy misy iray, dia atahorana ho very mpanjifa izy ireo izay nanao ezaka sy vola be. Ankoatr'izay, na dia ny fitomboan'ny 5% amin'ny fitazonana aza dia mety hitarika ho amin'ny 25-95% fitomboan'ny tombony.
Voucherify vao avy nampiditra a drafitra famandrihana maimaim-poana. Tombontsoa lehibe ho an'ireo vao manomboka sy SME izany mba hananganana fampiroboroboana mandeha ho azy, manokana ary manatsara ny fahazoana mpanjifa sy fitazonana maimaim-poana, miaraka amin'ny fampiasam-bola kely indrindra amin'ny fotoanan'ny mpamorona. Ny drafitra maimaim-poana dia ahitana ny endri-javatra rehetra (afa-tsy ny geofencing) sy ny karazana fampielezan-kevitra, ao anatin'izany ny fampiroboroboana manokana, ny karatra fanomezana, ny famafazana, ny fanondroana ary ny fanentanana momba ny tsy fivadihana.
Faly izahay manomboka manolotra drafitra famandrihana maimaim-poana. Mino izahay fa hanampy amin'ny fanombohana sy SMBE maro izany amin'ny fanombohana ny fitomboany ary faly izahay mandray anjara amin'izany. Voucherify dia natsangan'ny mpamorona, ho an'ny mpamorona ary faly izahay hanome teknolojia manara-penitra ho an'ny orinasa rehetra, amin'ny vidiny mora ho azy ireo.
Tom Pindel, Tale Jeneralin'ny Voucherify
Ny drafitra Voucherify maimaim-poana dia ahitana ireto manaraka ireto
Fanentanana tsy misy fetra.
100 API antso/ora.
1000 API antso/volana.
Fanohanana fiaraha-monina Slack.
Fampiofanana ho an'ny tena manokana sy fanofanana mpampiasa.
Ohatra iray amin'ny fanombohana izay nitombo tamin'ny fampiasana Voucherify dia Tous. Tutti dia fanombohana miorina any UK izay manolotra sehatra ho an'ny olona mamorona izay ahafahan'izy ireo manofa toerana ho an'izay ilaina amin'ny famoronana, na famerenana, fanadinadinana, fakana sary, fakana sarimihetsika, mivantana mivantana, na hafa. Tutti dia naniry ny hanangana programa referral sy fanentanana fampiroboroboana mba hanamafisana ny fahazoana azy ireo ary mila vahaolana rindrambaiko izay ho voalohany amin'ny API ary mifanaraka amin'ny maritrano mifototra amin'ny microservices ankehitriny izay mampiasa sehatra samihafa mifototra amin'ny API, toy ny mivatra, ampahany, ActiveCampaign.
Nisafidy ny hiaraka amin'ny Voucherify izy ireo. Izy ireo dia nanamarina ireo mpanome rindrankajy API-voalohany saingy nanana vidiny ambony lavitra noho ny Voucherify izy ireo na tsy nanolotra ireo sehatra fampiroboroboana rehetra tao amin'ny fonosana fototra. Ny fampidirana miaraka amin'ny Voucherify dia naharitra fito andro ho an'i Tutti, manana injeniera rindrambaiko roa ao anaty sambo, voaisa hatrany am-piandohan'ny asa amin'ny fampidirana mandra-pahatongan'ny fampielezan-kevitra voalohany. Misaotra an'i Voucherify, nitombo ny fahalianana tamin'ny tolotra nataon'izy ireo ary ny ekipany dia nahavita nalaza noho ny fanomezana fihenam-bidy ho an'ny asa soa sy ny incubator fanombohana.
Voucherify Tutti Fandinihana tranga
Azonao atao ny mahita fampitahana amin'ny antsipiriany momba ny drafitra famandrihana sy ny fetrany ao amin'ny Voucherify pejy pricing.
Momba ny Voucherify
Voucherify dia rindrambaiko fampiroboroboana sy fitantanana mahatoky API-centric izay manome fandrisihana manokana. Ny Voucherify dia natao hanomezana hery ny ekipan'ny varotra hamokatra haingana sy hitantana amin'ny fomba mahomby ny tapakila momba ny teny manodidina sy manokana ary ny fampiroboroboana karatra fanomezana, fanomezana, fanolorana ary programa tsy fivadihana. Noho ny API-voalohany, naorina tsy misy loha ary maro ny fampidirana ivelan'ny boaty, ny Voucherify dia azo ampidirina ao anatin'ny andro vitsivitsy, manafohy be ny fotoana mankany amin'ny tsena ary mampihena ny vidin'ny fampandrosoana.
Ny blocs fanorenana azo zahana dia manampy amin'ny fampidirana ny famporisihana amin'ny fantsona rehetra, na fitaovana rehetra, ary izay vahaolana e-varotra. Ny dashboard sariaka amin'ny tsena izay ahafahan'ny ekipan'ny varotra manomboka, manavao na mamakafaka ny fanentanana fampiroboroboana rehetra dia manala ny enta-mavesatry ny ekipa fampandrosoana. Voucherify dia manolotra motera fitsipika miovaova mba hampitomboana ny tahan'ny fiovam-ponao sy ny fitazonana tsy handoro ny teti-bolan'ny fampiroboroboana.
Voucherify dia ahafahan'ny orinasa amin'ny habe rehetra hanatsara ny taham-pahazoan-dry zareo, fitazonana ary fiovam-po toy ny ataon'ireo goavambe e-varotra, amin'ny ampahany kely amin'ny vidiny. Hatramin'ny androany, nahazo ny fitokisan'ny mpanjifa 300 mahery i Voucherify (anisan'izany ny Clorox, Pomelo, ABInBev, OVO Energy, SIG Combibloc, DB Schenker, Woowa Brothers, Bellroy, na Bloomberg) ary manompo mpanjifa an-tapitrisany amin'ny alàlan'ny fanentanana promo an'arivony manodidina. ny globe.
Andramo ny Voucherify maimaim-poana
Tags: agileonefisondrotana mandeha ho azytapakila fihenam-bidyfisondrotana maimaim-poanafanomezana karatraprograma fahatokiana apiprograma tsy fivadihanaNielsenpromotion apifandaharana referralampahanysweepstakestom pindelmanamarina
Ahoana no ahafahan'ny Startups mandresy ny Common Marketing Technology Challenges